दशैंकाे त्यस्तो भयो, तिहार यस्तो होस् ! « Gajureal
दशैंकाे त्यस्तो भयो, तिहार यस्तो होस् !
प्रकाशित मिति: ५ कार्तिक २०७६, मंगलवार १५:०५
दशैंको शुभकामना आदान-प्रदान सकिएसँगै सामाजिक संजालमा संप्रेषित हुने नकारात्मक टिप्पणीमा केहि कमी आएको देखिन्छ ।
कतै शुभकामनाको सकारात्मक उपलब्धि हो की ! खैर जे होस्, तिहार आउँदैछ, शुभकामनाकै कुरा गरौं ! जसरी एउटा मानिस जीवित रहन स्वास र प्रश्वासको दोहोरो प्रक्रिया हुन्छ, त्यसरी नै बोल्ने मान्छे र चल्ने प्राणीका दैनिक क्रियाकलापमा दोहोरो भूमिका हुनु जरुरी छ ।
कमजोरी भए हप्काउन पाईन्छ तर सम्झाउने सामर्थ्य भएकाहरुले मात्र । गाली गर्ने अधिकार उसलाई हुन्छ जसले माया गर्न सक्छ ।
आज गणतन्त्रको आगमन र प्रबिधि बिकाशको जागरणसंगै शाब्दिक एबम बौद्धिक अराजकताले ठाउँ लिएको छ । फेसबुक र युट्युबसंग माया लाएको छ । हावा चल्ने कुराको आभास मात्र पाउनु पर्छ, हाँगा हल्लाएर पात झर्नेको ओईरो लाग्छ । स्याल हुइयाँ मच्चाएर खेद्नेको धुइरो लाग्छ ।
सत्य खोज्दैन, तथ्य बुझ्दैन । गुह्य सबै खोल्छ । नीजी कुण्ठा सबै ओकल्छ । मित्र बनाउने भाँडो फेसबुकलाई शत्रु कमाउने ठाँडो बनाउँछ ।
यो ‘पर’-वृत्ति’ होईन ‘वर’वृति हो । यसले अविश्वास निमत्याउँछ । विश्वास गुमाउँछ । सेतोलाई कालो देखाउने, सत्यलाई गलत लेखाउने गर्दछ ।
तिहारको शुभकामना लागेकै हो भने, मनको दियो जागेकै हो भने राम्रा कुरा जति जोड्दै जाउँ, गलत जति छोड्दै जाउँ । राजाले वा काजीले, बड्काले गरुन् वा पाजीले ! आफ्नाले गरुन् वा अर्काकाले, बाहिरकाले होस् या घरकाले ! राम्रो कामलाई राम्रै भन्ने हो, देश हाम्रै बन्ने हो । पालेर राखे मनमा बिकार, भविष्यले भन्नेछ सबैलाई धिकार !